Ku saabsan Xarunta Caafimaadka ee Lancaster, U adeegidda Lancaster Tan iyo '72 Ku saabsan Xarunta Caafimaadka ee Lancaster, U adeegidda Lancaster Tan iyo '72
Gadaal ayaannu taaganahay bulshada caafimaad qabta
Marxalad kasta oo nolosha ah waxaan isku dhafanaa jirka, maskaxda, iyo qalbiga annaga oo bixinna daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyada bulshada iyada oo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadista bulshada. Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan. Taas macnaheedu waa inaan wax ka qabanno oo aan bogsiinno jirrada, laakiin sidoo kale waa muhiim, waxaan helnaa sababaha keena adoo ka shaqeynaya meel ka baxsan daryeelka tooska ah iyo diiradda saaraya cudurada bulshada ee ay tahay in wax laga qabto si loo gaaro sinaanta dhabta ah.
Waxaan si is-hoosaysiin leh u fahmeynaa una qaabilaynaa nolosha adag iyo awoodaha gaarka ah, waxaanan si aad ah ugu dadaalnaa sidii aan u burburin laheyn caqabadaha daryeelka oo dhan. Waxaan u jirnaa inaan hubino in qof walba uu helo daryeelka ay u baahan yihiin si ay u helaan oo caafimaad ugu helaan. Qoys walba, saaxiibkiis, iyo deris kastaaba waxay si buuxda ugu tabarucaan firfircoonaanta bulshadayada adag iyo kuwa taagan.
Waxaan nahay Qaran Caafimaad ahaan loo Aqoonsaday Bukaanka-Xarunta Caafimaadka
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waa xarun caafimaad oo qaran ahaan loo aqoonsan yahay Bukaan-socod eegtada Caafimaadka sababta oo ah qaabkeenna loo dhan yahay ee bixinta adeegyada daryeelka caafimaad oo ka turjumaya dhaqamada, qiimayaasha, iyo baahiyaha shaqsiyaadka aan u adeegno.
Adeegyada daryeelka caafimaadka ee 5 Goobaha Lancaster
adeegyada our waxaa ka mid ah daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka hab dhaqanka, iyo adeegyada bulshada.
Our Barnaamijka Qiime dhimista Waxay bixisaa qiime dhimis ama lacag aan rasmi ahayn oo loogu talagalay adeegyada caafimaadka iyo kahortagga ilkaha ee laga bixiyo xarumahayaga iyadoo lagu saleynayo dakhliga qoyska iyo cabirka.
Waxaan leenahay goobaha 5: South Duke Street, North Water Street, New Holland Avenue, iyo xarumo caafimaad oo gudaha Xarunta Fursadaha Fursadaha Bright Side iyo Reynolds Middle School.
Horumarkeena kooxaha daryeelka si taxaddar leh u daryeela bukaannadooda una yimaadda bulshadeena leh khibrado u gaar ah iyo sooyaal dhaqamo kala duwan.
Wax Ka Baro Adeegyada aan bixino
Raadi Goobaha our
Himiladeenna waa inaan gaarno sinaanta iyada oo loo marayo daryeel caafimaad oo soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadista bulshada oo dhan
Waxaan dhalanay 1972
Strawberry Street oo qayb ahaan ah, xarun caafimaad oo iskaa wax u qabso ah. Waxaan si xoog leh uga wada shaqeynay daryeelida kuwa u baahan daryeel iyo taageero. Markii aan sii kordhnay, waxaan awoodnay inaan ku darno shaqaale mushahar leh kooxdayada. Sannadkii 1980, waxaan bilownay bixinta daryeelka ilkaha ka sokow daryeelka caafimaad. Sidoo kale 1980-kii, waxaan u dhaqaaqnay xafiis ku yaal Rockland Street, waxaana ku biirey Xarunta Lancaster Neighborhood Health Centre iyo Xarunta Caafimaadka SACA waxaanan ku magacownay hay'adda cusub ee loo sameeyay "SouthEast Lancaster Health Services." Sanadka 2018, ururkeena wuxuu ugu gudbay magaca "Xarunta Caafimaadka ee Lancaster" si uu sifiican uga tarjunto adeegyadeena sii kordhaya iyo goobaha bulshada dhexdeeda.
Iyada oo loo marayo hoggaanka duqa magaalada Janice Stork, Magaalada Lancaster waxay na siisay dhul leh 625 South Duke Street. Laga soo bilaabo 1996, Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay uruurisay lacag ku filan oo ay ku dhisto xarun caafimaad oo cusub oo loogu deeqay dhulkii lagu deeqay. Dhismaha ayaa markii hore ka koobnaa 14 qol baaritaan caafimaad iyo 6 qaliin ilkaha ah. Waxaan iskaashi la sameynay Barnaamijka Kalkaalinta Caafimaadka ee HACC si kor loogu qaado aqoonta bukaanka. Sannadkii 2011, dib-u-habeyn weyn ayaa ku sameysay goobta Duke Street taas oo ballaarinta awoodda illaa 6 illaa 13 qalliin ilkaha ah oo ay ku jiraan aagga Ilkaha carruurta loogu talagalay in lagu bixiyo daryeel ilko oo raaxo leh oo raaxo leh carruurta.
Sideed dhinac ah
Qaabashada Nolosha derisyadeenna Qaxootiga
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay xarun caafimaad ku leedahay Xarunta Fursadaha Fursadaha Bright dhinaca koonfur-galbeed ee Lancaster City. Bartaan waxaa la furay Noofembar 2006 waxaana ku jira 6 qol baaritaan caafimaad oo loogu talagalay daryeelka bukaanka. Waxaa jiray wakhti ay xarunteena Bright Side xarun u ahayd qaxootiga iyo soogalootiga soogalootiga ah ee ku cusub beesheena.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay iibsatay mid ka mid ah Tamarta Tamarta ee Thomas Edison ee ku taal magaalada hoose ee Lancaster. Labadii sano ee soo socda, Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay qaadatay olole Capital Capital ah oo guul leh, Sinnaanta Caafimaadka iyo Helitaanka Lancaster (HEAL) si ay dib ugu cusboonaysiiso goobta taariikhiga ah xarun caafimaad oo horusocod leh oo leh 24 qol oo baaritaan caafimaad ah. Xarunta North Water Street ayaa loo furay dadwaynaha xagaagii 2010.
Dugsiga Dhexe ee Reynolds
Daryeelka Ku-saleysan Dugsiga
Sanadkii 2016, Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay iskaashi la sameysay Dugsiga Dhexe ee Reynolds si ay u furto xarun caafimaad oo ku saleysan dugsiga dhexdiisa oo bixisa daryeel aasaasi ah ardayda Reynolds, qoysaskooda, iyo kuliyada iskuulka.
Wadada New Holland
Waxaan ballaarinay howlaheena si aan ula kulanno baahiyaha sii kordhaya ee daryeelka caafimaad ee jaaliyadeena anagoo ku darnay goob 5-aad ah 802 New Holland Avenue, Suite 200. Sida dhismaheena labaad ee ugu weyn, goobtani waxay ku dartay 18 qol oo imtixaan ah, oo wadarta 64 qol oo baaritaan caafimaad ah dhamaan 5-ta goobood.